बधाई ! अन्तिम वनडेमा अष्ट्रेलियालाई हराउँदै भारतले जित्यो वनडे शिरिज , स्मिथको शतक गयो खेर - News20 Media
January 20, 2020 N20LeaveaComment on बधाई ! अन्तिम वनडेमा अष्ट्रेलियालाई हराउँदै भारतले जित्यो वनडे शिरिज , स्मिथको शतक गयो खेर
एजेन्सी । ओपनर रोहित शर्मा र कप्तान विराट कोहलीको उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि अष्ट्रेलियाविरुद्धको तीन एकदिवसीय सिरिज घरेलु टोली भारतले जितेको छ । बैंगलोरमा आइतबार भएको खेलमा भारतले अष्ट्रेलियालाई सात विकेटले हरायो । यससँगै भारतले सिरिज २–१ ले जित्यो । पहिलो खेलमा भारत १० विकेटले पराजित भएको थियो । दोस्रो खेलमा भारतले अष्ट्रेलियालाई ३६ रनले हराएको थियो ।
दुई सय ८७ रनको विजयी लक्ष्य पछयाएको भारतले ४७.३ ओभरमा तीन विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गरेको थियो । भारतको जितमा ओपनर रोहित शर्माले एक सय १९ रन बनाए । रोहितको यो एकदिवसीयमा २९औं शतक हो । कप्तान विराट कोहलीले ८९ रन बनाए । श्रेयर ऐरले अविजित ४४ र ओपनर लोकेश राहुलले १९ रन बनाए । अष्ट्रेलियाका एडम जम्पा, जोश हेजलवुड र एस्टन अगरले एक एक विकेट लिए ।
यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको अष्ट्रेलियाले निर्धारित ५० ओभरमा नौ विकेटको क्षतिमा दुई सय ८६ रन बनाएको थियोे । अष्ट्रेलियाका लागि पूर्व कप्तान स्टिभ स्मिथले एक सय ३१ रन बनाए । स्मिथको यो एकदिवसीयमा नवौं सतक हो । मार्नस लाबुसेनले ५४, एलेक्स करिले ३५, कप्तान आरोन फिन्चले १९ र एस्टन अगर ११ रन बनाए । भारतका तीब्र बलर मोहमद शामीले चार विकेट लिए । रविन्द्र जडेजाले दुई तथा कुलदिप यादव र नवदिप सैनीले एक एक विकेट लिएका थिए ।
पुनः चम्किए किङ मेसि ! उनकै निर्णायक गोलमा बार्सिलोना शीर्ष स्थानमा
मुश्फिकुर रहिमको दोहोरो शतकमा जिम्बाब्वेविरुद्धको एकमात्र टेस्ट बंगलादेशले जित्याे
February 25, 2020 February 25, 2020 N20